Xildhibaan Shaybe Sheekh Maxamuud oo ka mid ahaa baarlamaanka Puntland oo saaka Garowe lagu dilay. – Radio Daljir
Xildhibaan Shaybe Sheekh Maxamuud oo ka mid ahaa baarlamaanka Puntland oo saaka Garowe lagu dilay.
Agoosto 6, 2012 9:49 b 0
Garowe, Aug 06 – Alle ha u naxariistee xildhibaan Shaybe Sheekh Maxamuud oo ka mid ahaa golaha wakiillada Puntland ayaa saaka aroortii lagu dilay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland.
Xildhibaanka, ayaa la toogtay xilli uu ka soo baxay masaajid ku yaalla meel u dhaw xaafadiisa oo uu ku tukaday salaaddii subaxnimo, waxaana dilkiisa fuliyey rag baskoolado ku hubaysnaa sida warar hordhac ahi ay tilmaamayaan.
Raggii falkaasi gaystay ayaa isla markiiba goobta ka baxsaday, waxaana ciidamada amniga oo isla markiiba halkaasi tagay ay wadaan baaritaan ay ku raadinayaan raggii falkaasi gaystay.
Ma cadda sababta dhabta ah ee uu dilkiisu salka ku hayo iyo cidda ka dambaysa toona, mana jirto wax faah-faahin ah oo hay’adda dawladdu ay wali ka bixiyeen falka weerar ee lagu khaarajiyey mudanaha ka tirsanaa wakiillada Puntland.
Dilalka qorshaysan ee noocaan ah ayaa in muddo ah ka jiray qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Puntland, siiba magaalooyinka Bossaso iyo Galkacyo, hase ahaatee xilligaan ayaad mooddaa in ay ku soo siqeen magaalada caasumadda ah ee Garowe, waxaana bil ka hor lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaan jiray ciidamada amniga, halka dhawr maalmood ka horna uu dil ka badbaaday mas’uul ka tirsan warbaahinta Daljir.
Dibadbax lagu xusayey bixitaankii Al-shabaab oo maanta Muqdisho ka dhacay.
Hawlgallo dad lagu xir-xiray oo Garowe ka socda dilkii xildhibaanka kaddib iyo aaskiisa oo loo diyaargaroobayo.